USUKU LOMHLABA WONKE LWEZINGANE ZAMANTOMBAZANE 2019: KUHLE KAKHULU GCINA IZIQUBULO NEZISHO ZENGANE YEZINGANE - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ABESIFAZANE
Usuku Lomhlaba Wonke Lwengane Yentombazane 2019: Kuhle kakhulu 'Gcina Ingane Yentombazane' Iziqubulo Nezisho
Ikhaya Abesifazane Abesifazane oi-Shivangi Karn By UShivangi Karn ngo-Okthoba 11, 2019
I-International Day of the Girl Child igujwa minyaka yonke ngomhlaka 11 Okthoba ukubhekana nezinselelo ezibhekene namantombazane emhlabeni wonke nokukhuthaza imfundo yawo, amalungelo abantu nokulingana. UMkhandlu Kazwelonke Wezizwe Zonke waphasisa isinqumo ngomhla ziyi-19 Zibandlela 2011 sokumemezela umhla ziyi-11 kuMfumfu njengoSuku Lomhlaba Wonke Lwezingane Zamantombazane.
Isikhumbuzo seminyaka engu-10 somshado sifisela umyeni
Bobabili abesilisa nabesifazane babaluleke ngokulinganayo ukugcina ukulingana kwezenhlalo. Kodwa-ke, umnikelo wabesifazane usenezinyanga eziyisishiyagalolunye ngaphezulu, ongeke uqhathaniswe nanoma yini enye emhlabeni. Bangabazalisi kanye nesizathu sokuthi kungani abantu bekhona kule planethi.
Icala elibhekiswe emantombazaneni belilokhu lenyuka - kungaba ukubulawa kwabesifazane, ukudlwengulwa, ukushona kwamalobolo noma ukucwaswa ngokobulili. Ngenxa yalezi zizathu ezingenhla, sekubalulekile ukwenza abantu bazi ngokugcina ingane yentombazane neqhaza labo elibalulekile emndenini, emphakathini nasemhlabeni.
Mayelana nalokhu, sithengele kuwe 12 enamandla ukusindisa iziqubulo namazwi ezingane zamantombazane. Bheka!
1. INTOMBAZANE isho isipho empilweni yangempela.
2. Ayikho intombazane ngakho, akekho umama, ekugcineni ayikho impilo.
3. Musa ukubanda, amantombazane abaluleke ngaphezu kwegolide!
4. Yonke indoda idinga umama, unkosikazi, udadewabo pho kungani ingadingi indodakazi
5. Uma ubulala amantombazane, ngubani ozozala izizukulwane ezizayo.
amakhambi asekhaya okukhulisa usayizi webele ezinsukwini eziyi-10
6. Gcina ingane yentombazane, wonge kusasa.
7. Wenza umhlaba ukhanye kodwa usalwela ukubona ukukhanya.
8. Indodakazi yethu iyifindo elihlanganisa umndeni ndawonye.
izinzuzo ze-anulom vilom pranayama yesikhumba
9. Vumela ingane yakho yentombazane indize kodwa ingakhali!
10. Ingane yentombazane ifana nehlumela, mayiyiqhakaze ibe yimbali yakusasa.
izinzuzo zokuphuza itiye eliluhlaza ebusuku
11. Gcina ingane yentombazane ukusindisa ubukhona bakho kule planethi.
12. Indodana iyindodana ize ithole umfazi, kodwa indodakazi iyindodakazi impilo yayo yonke.
wazi ngawe ngosuku lokuzalwa
ungasusa kanjani isilevu esiphindwe kabili ngokwemvelo
singakwazi ukufaka uju ebusweni nsuku zonke
kanjani ukuthola ubuso obulungele amadoda
ngizoba nezingane ezingaki ngokuzayo